Imikhiqizo Factory - China Imikhiqizo Abenzi nabaphakeli
i-bio-based succinic acid / bio-based amber
Umthombo wezobuchwepheshe: Ukukhiqizwa kwe-acid succinic acid ngobuchwepheshe bokuvutshelwa kwe-microbial: ubuchwepheshe buqhamuka kuprofesa zhang xueli iqembu lokucwaninga "lesikhungo sobuchwepheshe bezimboni zezimboni, i-Chinese academy of sciences (tianjin)". Lobu buchwepheshe busebenzisa uhlobo olusebenza kahle kakhulu lofuzo emhlabeni. Izici zomkhiqizo: Impahla eluhlaza ivela kushukela wesitashi ovuselelekayo, yonke inqubo yokukhiqiza evaliwe, inkomba yekhwalithi yomkhiqizo ifinyelela ku ...
Izici: I-Sodium succinate yi-crystalline granule noma i-powder, engenambala emhlophe, engenaphunga, futhi enambitheka we-umami. Umkhawulo wokunambitheka ngu-0.03%. Kuzinzile emoyeni futhi kuncibilika kalula emanzini.
Izinzuzo: Isebenzisa ushukela wesitashi ovuselelekayo njengempahla eluhlaza ukukhiqiza ngqo i-sodium succinate ngokusebenzisa ukuvutshelwa kwe-microbial. Kungumkhiqizo we-biomass omsulwa; kuyinqubo emsulwa eluhlaza ngaphandle kokungcola, futhi ikhwalithi yomkhiqizo iphephile futhi inokwethenjelwa.
I-bio-based 1,4-butanediol yenziwa nge-bio-based succinic acid ngezinqubo ezinjenge-esterification, hydrogenation, nokuhlanzwa. Okuqukethwe kwe-bio-carbon kufinyelela ngaphezu kuka-80%. Kusetshenziswa i-bio-based 1,4-butanediol njengempahla eluhlaza, amapulasitiki abolayo i-PBAT, i-PBS, i-PBSA, i-PBST neminye imikhiqizo ekhiqizwayo yiplastiki elinciphisa i-biomass futhi lihambisana ngokuphelele namazinga wokuqukethwe we-biomass womhlaba jikelele.